Ime ụlọ imepụta ihe - Nhazi ụlọ ime ihe Bucharest - Ime ụlọ ime ụlọ Constanta - Nobili Ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, imepụta, ahịa
Ụlọ ọrụ imepụta ụlọ ahịa
An ime imewe oru ngo na-agụnye na-eke a echiche omenala, pụrụ iche maka onye ọ bụla ahịa, ya mere, ọ bụrụ na ị hụrụ onwe gị na a style imewe na Pọtụfoliyo bụ n'ihi na ị dị iche iche, onye ọ bụla pụrụ iche n'onwe ya na ihe eji emepụta onwe ya nke anyi mepụtara maka gi ga - egosi gi n'omume zuru oke nke ndu gi.
Nzọụkwụ mbụ - na-akpọ anyị ma ọ bụ zipu mail ụlọ ụlọ nke na-achọ ka ndokwa na-enweta na-enye na nke kasị nso oge anyị ọkachamara ga-ịkpọtụrụ gị maka a ntụle zuru ezu na ikekwe ka a nzute.
A na-enye ego maka ọrụ 3D ma ahazie ya ma dezie dịka elu na ụdị imewe a họọrọ. Ná nzukọ mbụ anyị ga-atụle n'ụzọ zuru ezu na ihe ndị metụtara ndị na-aga nke ọ bụla n'ime ụlọ, anyị mata style of obodo eji enyere ndụ aka na mgbe a nkwekọrịta ga-gaa na ọnọdụ na-ndokwa maka ịlele akụkụ mbụ osise na-eru a ọhụrụ ndekọ bụ ma mgbanwe subdivision.
Ihe e kere eke na imewe nke a haziri oru ngo na-achọ ọtụtụ awa nke nrụsi ọrụ, na-amụ ọtụtụ catalogs nke anyị họrọ nri ngwaahịa dabara adaba style na ọ bụghị dịghị nri mmefu ego maka ahịa na ngwaahịa na incadrandu- anyị ga-enye ha ya ka onye ahịa wee nwee ike ịmepụta ihe dị n'ime ntinye nke 3D.
Anyị na-enye ndị ahịa anyị nkwado dị mkpa iji tinye ọrụ ahụ iji rụọ ọrụ ka ha wee nwee ike ịhọrọ otu n'ime nchịkọta ọrụ atọ ndị e kere dịka mkpa ha si dị.
Nobili Pro Ọrụ Nyocha (atụmatụ 3D ahaziri onwe ya, map atụmatụ, onyinye ihe onwunwe)
- Ụlọ, ụlọ ahịa nke oge a bụ 14-19 euro / sqm, dabere na elu na ụdị nkewapụ iche.
- Ụlọ, ụlọ ahịa ndị mara mma nke dị na 16-22 euro / sq m, dabere na elu na ụdị nkewa.
- Ụlọ, ọnụahịa ụlọ ahịa 20-30 euro / sqm dabere na elu na ịke ahọrọ.
Planning na ohere njikarịcha, 3D imewe, ngwá ụlọ imewe, photorealistic oyiyi, map imewe (osise 2D na eletriki na ịdị ọcha nrụnye, Eserese 3D na ngwá ụlọ creat- ọnụ ọgụgụ Eserese kere uko ụlọ, repartitioning, wdg The price maka ihe ha - eji ya rụọ ọrụ, ihe ndị anyị na-enye ozugbo).
OZI OZI OKWU OZI (KEYE) - ego Na-arịọ
Planning na ohere njikarịcha, 3D imewe, ngwá ụlọ imewe, photorealistic oyiyi, map imewe (osise 2D na eletriki na ịdị ọcha nrụnye, Eserese 3D na ngwá ụlọ creat- ọnụ ọgụgụ Eserese kere uko ụlọ, repartitioning, wdg Ofeta price nke ihe ị - eji ya rụọ ọrụ, ihe ndị anyị na-enye ozugbo).
Nchịkọta oru gụnyere:
-Iji contracts maka ewu na ime ma ọ bụrụ na e nwere ugbua a imewe ike mere ka enyere na ịhazi ọrụ na saịtị (atụmatụ nzọụkwụ na-arụ ọrụ, ya achọpụta na nlekota ọrụ ka izute ngo imewe).
-Iji contracts omenala ngwá ụlọ Nsukka (ngwá ụlọ mmepụta nlekota na nkwenye iji soro ihe echiche na technical data Ibé akwụkwọ nke draft imewe ngwá ụlọ).
- Nkọwa nke ịnakọta ngwá ụlọ na Ịtali, nyochaa nnyefe na ntinye nke ngwá ụlọ nyere iwu.
- Ịnyefe nnyefe na ntinye nke ihe niile agbakwunyere ọrụ ahụ.
Iji nwee ike ịza arịrịọ ndị ahịa anyị si n'obodo ndị ọzọ dị na mba na ná mba ọzọ anyị kere:
ONLINE CORPORATE DEIGN DESIGN SERVICE
- ahịa 14-19 euro / sqm maka ụlọ, ebe obibi nke oge a.
- 16-22 Euro mp ọnụahịa maka ụlọ ndị mara mma.
- ahịa 22-35 euro / sqm maka ụlọ, ụlọ ọrụ.
nke bụ ihe ọ pụtara:
-Binye ihe osise na ihe osise site na n'ime adreesị ozi-e ekwusara na saịtị.
-N'ime oge kachasị nta ị ga-enweta ụgwọ a na-enye ma onye otu ụlọ ọrụ ga-akpọtụrụ gị ga-esi kọwaa otú ọrụ a si arụ ọrụ.
- Mgbe ị kwetara na ị ga-enye gị, ị ga-enweta ụdị ahaziri ederede nke ị ga-achọ iji mejupụta ma ziga ya site na mail. Mpempe akwụkwọ a chọrọ ihe ọmụma maka ebe ọ bụla n'ime ụlọ, ụdị ejiji mara mma na ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ ga-enyere anyị aka ịchọta kpọmkwem ihe ịchọrọ.
-Ọ emepụta gị ohere ke 3D (undeveloped) na anyị ga-ezitere mail 3D Eserese n'ihi na ị na-aghọta na-ekweta nkebi, mgbe ndokwa ga-arụ ọrụ 3D ohere. N'ime oge a niile, anyị ga-ejikwa ekwentị na mail zite aka na imekota ọnụ ma nweta nsonaazụ kacha mma.
-N'ụzọ sara mbara oru ngo dị njikere, ị ga-enweta na mail tupu 3D Eserese na mgbe, mgbe ịnakwere ngwugwu site ozi na-enweta oru ngo nchekwa na e dere niile data dị mkpa maka mmejuputa iwu oru ngo (osise 2D na eletriki na ịdị ọcha nrụnye, Eserese 3D na ngwá ụlọ creat- ọnụ ọgụgụ Eserese kere uko ụlọ, repartitioning, wdg ofeta price maka ihe na anyị na-eji na oru ngo ihe ị na-enye kpọmkwem). Mgbanwe ọ bụla ịchọrọ ịchọta na ọrụ anyị chọrọ agaghị achọ ụgwọ ọzọ. Anyị na-aka na anyị ga-enyere mejuputa oru ngo imewe ka ọgwụgwụ N'ihi ga-abụ kpọmkwem dị ka oru ngo 3D site njikere anyị na-akwado ụlọ ọrụ mmepe na ga na-arụ ọrụ na site na-enye ihe ndị ị na-na na-eji na-ngo 3D. Ihe ọ bụla ụdị ime imewe ngo ị na-ahọrọ (n'ụlọ, Amọraịt, ulo, hotel, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, mmanya, shop, ọgwụ na ahụ ike ụlọ ọgwụ, ịma mma Ụlọ Mmanya omezi isi) anyị na gị ebe na ọ na-amara na-eri na-enye osụk echiche nke ime ụlọ 3d. Ná mmechi, ma ị nọ Cluj Napoca, Timişoara, Oradea, Arad, Sibiu na Hunedoara ga-akwụ otu price maka oru ngo imewe ka a ahịa na Bucharest, Constanta, Giurgiu, Calarasi, Galati, Tulcea, Craiova, Brasov na Prahova . Kọntaktị ekwentị: 0720.665.365
Services ụlọ ọrụ ime imewe,-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nsụgharị ndị 3d, n'ime ime, ụlọ kpochapụwo, oge a, ahịa si 17 euro mita (ikpeazụ enye price maka ime imewe oru na gbakọọ dị ka ọnụ ọgụgụ nke square mita wuru, ọ dịghị. Of ụlọ style oke na mgbagwoju nke oru ngo n'okpuru mmejuputa) na Constanta, Bucharest, Ploiesti, Brasov, Pitesti, Galati.
Category isiokwu ọrụ ime imewe, n'ime ime imewe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ, kpochapụwo, oge a, obi classic ime imewe ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Ogwe, cafes, hotels, gọọmenti rụrụ, ụlọ ahịa, dị mma ime imewe ọrụ, imewe, ije 3d , Bucharest, Constanta, Brasov, pitesti, ploiesti, Galati, Cluj, Timişoara, architects, ime architects mgbe nile, mgbe nile ije, ndị na-emepụta ụlọ -atụpụta ụkpụrụ ụlọ ego mgbe nile.
Ime ụlọ imepụta ego - Onye na-emepụta ụkpụrụ ụlọ imepụta Bucharest - Ime ụlọ ime ụlọ Constanta
Iji nwee ihe ịga nke ọma n'ime imepụta ime ụlọ, ị ga-achọ maka ọrụ nke ụlọ ọrụ ime ụlọ bụ mkpebi kasịsị mma. Ihe dị iche iche dị n'ime ime dị iche iche ma nwee ụfọdụ ihe njirimara, onye ọ bụla na-achọkwa itinye akara ha na nhazi ma ọ bụ mma nke ụlọ ya, ụlọ ma ọ bụ obodo nta ya. Ya mere Noble Interior Design bụ zuru okè oke maka imewe oru ezubere iche azụmahịa (restaurant, mmanya, hotel, uwe shop, Hairdressing Ụlọ Mmanya, ọgwụ ọgwụ) ma ọ bụ Rezindential (ụlọ, ụlọ). N'ịbụ ahịa isi kemgbe 2008 na na n'elu 250 oru nke ime imewe na ụkpụrụ ụlọ emejuputa nnukwu na nnukwu obodo nke Romania na Bucharest, Constanta, Brasov, Ploiesti, Craiova, Giurgiu, Galati, Braila, Tulcea, Calarasi, Bacau, Suceava , Focsani, Vaslui, dị mma ime imewe obụp isi ngwọta na mmejuputa iwu niile oru ngo pụrụ iche n'ime ime imewe. Onye ọ bụla ohere nke ụlọ ma ọ bụ Amọraịt + na ị chọrọ iji ndokwa a ga-ekwukwa ihe e ji mara nke style of ime imewe họọrọ na-anọchite anya mmasị na okwu nke ije na ime imewe. A kpochapụwo ịke nke ime imewe na-achọ a chromatic oghe ka osisi ngwá ụlọ mere na Italy, a osisi flooring na ngwa na risịrị họọrọ nso nke n'elu na-emepụta na suppliers na Europe. Ihe ọkụkụ dị oke mkpa dị ka chandelier ma ọ bụ ọbụna ọka ndị a na-achọ mma na ihe ndị ọzọ dị ntakịrị dị na ya na-ebute ụzọ nwelite nke ụdị ịmepụta ime ụlọ. Ọdịdị nke njedebe ga-eme ka ọhụhụ nke ihe ndị e mejuputara na ụdị nke ime ime na imewe ime. N'ezie, nhọrọ nke ọ bụla ga-adabere na nkwụnye ego nke onye ahịa ahụ na ihe ụtọ ya. Ọnụ na architects na-emepụta Noble Interior Design, ndị ahịa pụrụ ele ime imewe ngo 3D format tupu ya nwere ike na-emejuputa atumatu. Ozugbo enyerela akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ndị ọkachamara ga-amalite ọrụ imepụta ime ụlọ a, na-akparịta onye ahịa ahụ ajụjụ n'agbanyeghị ọrụ ahụ. Architects na imewe na ime imewe ike ga-elekwasị anya na-akpọ a ọzọ ọtọ ohere dị ka ihe ọ bụla ị chọrọ iji ndokwa a ụlọ, ulo, hotel, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, shop ma ọ bụ ịma mma Ụlọ Mmanya. Enweghi ike imepụta ime obodo bụ otu ndị nwere nkà ndị ọrụ nlekọta ha kachasị mma, njedebe ikpeazụ ga-eju gị anya. Zitere anyị site na email (nobilidesign [@] gmail.com) Ihe ngosi 2d na okwu ole na ole banyere otu ịchọrọ igosi ụlọ gị ma ọ bụ azụmahịa gị. Atụmatụ akwụ ụgwọ ime ime ụlọ ọrụ ọnụahịa: Ime ụlọ imewe kpochapụ ụdị ụlọ ọnụahịa 16-22 euro sq ft na-enweghị VAT. Ime ụlọ imepụta ụdị ụlọ ndị a nke 15 na 19 euro sq ft na-enweghị VAT. Ahịa ime ụlọ ahịa ọnụahịa 14 - 25 euro sq. Ọnụahịa zuru ezu nke imepụta ime dị iche iche dịka ụdị ịhọrọ, nhazi na ọnụ ọgụgụ nke ụlọ, mgbagwoju anya na ihe ndị a chọrọ maka ọrụ ahụ. Onye na-emepụta onye mmepụta ihe na-emepụta Gabriela Nechifor.
Ụlọ ọrụ imepụta ihe na-eme atụmatụ imepụta ihe
Ọrụ ime ụlọ anyị na-adabere na mkpa nke onye ahịa na ọhụụ nke ụlọ ọrụ ọkachamara. Na a otu nke ọkachamara esịnede-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, n'ime ime mmebe, mputa, mmebe ngwá ụlọ dị n'azụ ọ bụla oru ngo ga-enweta nke kacha mma na ndụmọdụ na ngwọta maka ime imewe nke ụlọ ma ọ bụ Amọraịt, n'agbanyeghị nke obodo ebe unu nọ. Ahịa 3D ime imewe oru ngo na-amalite mgbe 17 euro / sqm, mgbanwe dabere na ebe nke ụlọ, nọmba nke ụlọ a ga-eguzobe na N'ezie n'ime imewe nhọrọ. Uzo nhazi nke obula choro oru ndi otu, mmekorita, na ntuziaka site n'aka ndi okachamara n'ubi.